पहिलो दिन पछि अन्तिम जानेबेलामा पनि बाँच्न देखिन्छ मनपर्ने संग ब्रेक मानिस बिल्कुल असम्भव छ। सुरुमा - शोक को unspeakable पीडादायी ज्वार, निराशाजनक sobs, एक सानो पछि संग - कालो melancholy, उदासीनता, उदास दमनकारी दुःख, खपत सबै मानसिक बल। यो अलग, यो depressing तस्वीर जस्तो देखिन्छ "सधैंभरि।" तपाईं आफ्नो आँखा खोल्न र ओछ्यानमा बाहिर प्राप्त गर्न चाहेको बेला तपाईं के गर्नुहुन्छ, आफूलाई हेरचाह र भविष्यको लागि योजना बनाउन? अर्को शब्दमा, कसरी विभाजन बच्न?
थप बाहिरको र गहिरो: यो कठिन हटाउन धेरै विकल्प छन्। तपाईं मानक तरिका, अद्वितीय भरोसा गर्न सक्छन् पालो आधारित रणनीति, जो आफ्नो शोक को बाह्य सुविधाहरू द्रुत राहत चाहिन्छ। यी निम्न एल्गोरिदम समान हो: रुन, अनुभव गर्न सुरु आत्म दया, आदि - तपाईं बदला लिन एक योजना, आदि संग आउन छाडेका साझेदार तिर रिस महसुस यो सबै महिनाको छुट्टिदै पछि अन्त्यमा, तपाईं नयाँ प्रेम लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई तल फोडे। निस्सन्देह, सिद्धान्त, यो सबै धेरै पत्यार पार्र्ने देखिन्छ, तर व्यवहार मा - पहिलो कदम को एक मा फँस गर्न सकिँदैन, र 30 दिन पछि, एउटा नयाँ प्रेमी को काखमा हुन छैन, र मनोरोग वार्ड मा।
निस्सन्देह, छुट्टिदै पछि एक मानिस संग, तपाईं आफैलाई नकारात्मक भावना बाहिर जारी गर्न अनुमति निश्चित, अन्यथा तिनीहरू भित्र तपाईंले नाश हुनुपर्छ। तर तिनीहरूले विकास गर्नुपर्छ। तसर्थ, सबै कुरा पूर्व प्रेमी - तल। धेरै स्वागतम प्रकृति विच्छेद गर्न वा तिनीहरूलाई बाल्न, तर अझै पनि यो सामना गर्न प्रयास गर्न राम्रो छ र अपरिचित परिचित वस्तुहरु पास भयो।
यसबाहेक, यो सम्बन्ध को बिच्छेद बाँच्न किनभने, तिनीहरूको आत्म-सम्मान सम्बोधन गर्नुपर्छ - त्यसपछि केही दर्जन वस्तुहरू यसलाई कम। परंपरागत, छवि परिवर्तन सुरु हुने बेला, सबै हालतमा उपस्थिति सुधार। एरोविक्स, पौडी, मालिश, नृत्य, सना र पूर्ण दराज अद्यावधिक - अधिक, राम्रो। यसलाई तपाईँको वर्तमान गतिविधि तपाईं एक कठिन हटाउन कसरी चाँडै निर्भर हो। तपाईंले भ्रमण गतिविधिहरु को प्रभावशाली सूची, अधिक सफल र बढी सम्भावना पुनर्वास आयोजना गर्न। जो पूर्ण उदास विचार तपाईं विचलित खेल र बौद्धिक गतिविधिहरू, साथै अप अपार्टमेन्ट वा महान् धोने मा सामान्य सफाई आउन र। निस्सन्देह, व्यायाम र घरेलू घरधन्दा गर्ने डुबा छैन बाहिर heartache, तर कम से कम तपाईं सामान्य आफ्नो शरीर कारण हुनेछ र आफ्नो ग्रह गर्न ल्याउन। एक अनावश्यक कुरा फाल्ने, यो संग तपाईं landfill र सबै संचित negativity पठाउन देखिन्छ।
त्यहाँ देखिने उपयुक्त कार्य, यो चरण मा नगर्न गर्नुपर्छ जो छन्। तिनीहरूलाई बीच - एक सख्त आहार, रक्सी खपत, नयाँ सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रयास। अब आफ्नो शरीर तनाव को एक अभूतपूर्व शक्ति अनुभव छ, र यसैले, तपाईं राम्रो पोषण आवश्यक छ। अन्यथा, तपाईं रक्तअल्पता, थकान, निराशा र यस्तो क्षयरोग वा क्यान्सर रूपमा पनि गम्भीर रोग कमाउन जोखिम। ठूलो तरिका नकारात्मक छुटकारा गर्न - मजबूत सेक्स को प्रतिनिधिहरु बीच बलियो पेय एक धेरै साधारण misconception छ। वास्तवमा, रक्सी मात्र मास्क, यो सुलझाने छैन समस्या। र यस्तो "चिकित्सा" दुखाइ नयाँ शक्ति संग रोल, समर्थित पछि अर्को दिन, यसबाहेक, hangover को भयानक। ताजा उपन्यास लागि, तपाईं विचार गर्नुपर्छ रूपमा - तपाईं इमानदार चुनिएको नयाँ संग गर्दै गर्छन्। यो पूर्व-साझेदार संग एक विभाजन कसरी बच्न बस एक विकल्प छ भने, त्यसपछि तिनीहरूले बर्बाद गर्दै छन् र केवल एक पनि बलियो सास्ती नेतृत्व।
बाहिर संसारमा ब्यालेन्स केही क्रमबद्ध गर्न सक्छ पछि, यो भित्री जाने समय। यो एक मनोवैज्ञानिक वा सत्र को एक पाठ्यक्रम गर्न भर्ना गर्न सबै भन्दा राम्रो छ समूह मनोचिकित्सा को। यी सत्र मा तपाईं कुरा र सम्बन्ध मानिस मा एक ब्रेक कसरी बाँच्न सिक्न, आफ्नो भावना साझेदारी गर्न सक्षम राम्रो हुनेछ। यो पनि निष्पक्ष, unrequited प्रेम को आफ्नो कहानी विश्लेषण इमानदार सबै प्रश्नहरूको जवाफ हुनुपर्छ। अवस्थामा को 99% मा, यो पूर्व मनपर्ने, मात्र होइन सही छ जस्तो देखिन्छ, तर तपाईं बिल्कुल indifferent छन्।
वास्तवमा, एक प्रेम एक साथ एक विभाजन बच्न कसरी प्रश्न, तपाईंले मात्र आफूलाई लागि जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। एक ठ्याक्कै परिचित छ: यो एकदम सम्भव छ। आफू र आफ्नो खुसी भविष्यमा निष्कपट विश्वास, मन को बल र समय यो कठिन बाटो मा तपाईं को लागि एक समर्थन हुनेछ।
तपाईंले यी पक्षहरूमा मा अपमान हुनेछ प्रारम्भिक संकेत
सामाजिक मिडिया यी9गल्तीहरूको, तपाईं सम्बन्ध नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ
अधिवेशनको बच्चा मूल कुराहरु को अधिकार र कर्तव्य परिभाषित
सेब जामको साथ पाई। साधारण व्यञ्जनहरू
आफ्नो पंजे पंजे मा नंग्रा कति बिरालोहरु छ?
संख्या को इतिहास। वास्तविक संख्या को विकास को इतिहास
सहज सुत्ने लागि छोराछोरीको गद्दा आकार
Zinerit: निर्देश, सङ्केत गर्छ, चेतावनी